I-Duplex ngaseLwandle lweGadi yoLwandle - I-Airbnb
I-Duplex ngaseLwandle lweGadi yoLwandle
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguArturo
UArturo ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-duplex exhotyiswe ngokupheleleyo kwindawo yokuhlala edolophini enengca kunye nephuli. Terrace ngefanitshala ekhokelela ngqo egadini kunye pool, Imigangatho emibini, kumgangatho ophantsi ithala ukuya echibini, igumbi lokuhlala, ikhitshi epheleleyo, yangasese, ithala ngasemva. Kwiimitha ezili-150 ukusuka elunxwemeni.
Umthamo wabantu aba-5 (amagumbi ama-2 aneebhedi ezimbini nganye kunye nebhedi esongwayo).
akukho ndawo yengxolo
Upaka emnyango okanye kwiterrace engasemva.
Iqula liyafikeleleka ukusuka kwindawo engaphambili.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo:
Ikhitshi, i-oveni, ifriji enefriji, imicrowave, umenzi wekofu, umatshini wokuhlamba.
Ulwandle luyafikeleleka ukusuka kwidolophu (ukuwela isitalato).
4.74 · Izimvo eziyi-37
Ukuba ufuna ukuchitha iholide kwiMeditera kude nokuphazamiseka kokuxinana, le yindawo yakho. Indawo efanelekileyo yokonwabela ukhenketho lolwandle olwahlukileyo, ngaphandle kokuxinana, apho usenokubona amalwandle asendle kunye neentombi ezinyulu kunye nalapho unokufumana khona ulwandle oluhle kakhulu kwindawo.
I-duplex yethu, ephakathi kwe-Playa de Nares Residential Complex, ecaleni kolwandle, i-40 km ukusuka kwiidolophu zembali zaseCartagena naseLorca. Kule duplex uyakonwabela ezona holide zibalaseleyo zobomi bakho.
Umncedi uxhotyiswe kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya lakho ePuerto de Mazarrón.
Ifumaneka kwindawo yokuhlala yasePlaya de Nares - eLa Playa de Nares. Uya kuziva usekhaya. - ibandakanya indawo eluhlaza, i-swimming pool yabantu abadala kunye nabantwana kunye nokufikelela ngokuthe ngqo elwandle. Indawo eyaneleyo. I-Apartment enamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese, i-terraces ezimbini ezinokufikelela ngokuthe ngqo kwigadi kunye ne-pool. Ihonjiswe ngokupheleleyo kwaye inendawo eyaneleyo yokuba ukonwabele. Kukwabandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nomatshini wokuhlamba.
Iinkonzo kunye neendawo eziqhelekileyo
Unokonwabela zonke iinkonzo zeNdawo yokuHlala. Iigadi kunye nephuli. Unokufikelela ngokuthe ngqo elunxwemeni ukusuka kwindawo yokuhlala.
Unayo i-wifi yokufikelela kwi-intanethi kwi-duplex.
Ihlala ikhona ngefowuni kuyo nayiphi na imibuzo.
Ukungena kunye nokuphuma kuya kuhlala kuqhutywa ngumntu othembekileyo.
EPuerto de Mazarron
Ngabantu abanokhenketho oludityanisiweyo lokuhlala iminyaka emininzi.
Ngokungafaniyo nabanye, ukwakhiwa kwamakhaya anentsapho enye neendawo zokuhlala kuye kwakhuthazwa ukuba kuphetshwe ukuxinana.
Inazo zonke iinkonzo eziyimfuneko: iivenkile ezinkulu, iikhemesti, iivenkile ezahlukeneyo, imarike ephakathi, ukuhamba, njl.
INares yenye yezona ndawo zithuleyo ePuerto de Mazarrón. Ngolwandle oluhle kunye necandelo elihle ngaphandle kwezakhiwo ezide. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuziqhelanisa nokuntywila kwimidlalo yamanzi, ukusefa emoyeni. Yindawo ezolileyo kakhulu kwimizuzu nje eli-10 ukusuka edolophini.
Unokujikeleza ngeenyawo, ngebhayisekile okanye ngemoto. Yindawo ezolileyo kakhulu apho ukupaka kungeyongxaki. Ungayipaka imoto yakho ngokulula.
Ukwamkelwa kunye nokunikezelwa kwezitshixo